Archive du 20200625
Fiara vita Malagasy "Gasycar" Ny Sinoa sy Alemà no hamokatra azy…
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy omaly ny marika fiara ambara fa tena vita Malagasy dia ny “Gasycar”, ka ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina no nitarika ny lanonana.
Filankevitry ny tanàna Nekena avokoa ireo teboka goavana
Tamim-pilaminana ihany no niafaran` ny fivoriana ara-potoana teny amin`ny filankevitry ny tanànan` Antananrivo Renivohitra na dia nisy mpanolontsaina no nampiaka-peo vantany vao nivoaka ny lahadiniky ny fivoriana.
Dany Rakotoson « Mila antoko mpanohitra matanjaka eto »
Miezaka mametraka ny fanantenana ho an'ny vahoaka ny mpitondra amin'izay hieritreretany azy, hoy ny mpanao politika, Dany Rakotoson, raha naneho ny heviny mikasika ny fihetsiketsehan’ny fitondrana ankehitriny, mba hilazana fa miasa izy.
Filankevitry ny minisitra Maro ny fanadihadiana hatao any anaty ministera
Nanome toromarika ireo ministera tsirairay nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly ny filoham-pirenena.Izany moa dia tafiditra indrindra amin’ny drafi-panarenana ny toekarena sy ny sosialy mandritra ny enim-bolana faharoa amin’ity taona ity,
Toe-javatra mampiahiahy any Nosy Be Mpanjono 9 tsy hita popoka
Mpanjono Malagasy miisa 4 no tsy hita popoka tsy hay na maty na velona nanomboka ny sabotsy 30 mey ka hatramin’izao. Nanjono tany amin’ny fari-dranomasin’i Nisy Be izy ireo.
Fampiasana fahazoan-dalana hosoka Fiara sprinter iray no tratra teny Ankazobe
Mbola misy ihany ny minia mandìka ny lalàna sy fepetra momba ny tsy fahazoana mivoaka sy miditra ny faritra Analamanga ka mampiasa antontan-taratasy hosoka.
Misaona ny asa fanaovan-gazety Nodimandry i Lôlot Ratsimba
Misaona ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety. Nodimandry omaly alarobia 24 jona 2020 teo amin’ny faha-54 taonany i Ratsimba Nambinintsoa Solomon na Lôlot Ratsimba no anarana nahafantarana azy teo amin’ny sehatry ny fanaovan-gazety.
Fiarovana ny ala Tsy nahomby ny paikady nandritry ny 30 taona
Taorian’ny fihaonana voalohany teo amin’ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra tamin’ireo mpitantana ala arovana natao teto
Toamasina “Manomboka voafehy ny aretina”
Araka ny tatitry ny governoran` ny faritra atsinanana omaly, dia manomboka voafehy ny valanaretina COVID-19 ao Toamasina. Raha ny fanazavana nataony dia mihoatry ny 50%n` ireo olona voatily hoe mararin` ny COVID-19 no sitrana.
Tsiry Andriamihantasoa “Ho aiza isika ity ?”
Lavitra loatra ny elanelana misy eo amin'ny fari-piainan'ny Vahoaka Malagasy. Mifanalavitra ny vola miditra eo amin'ny mpanankarena sy ny mahantra. Tsy mahafehy trano intsony ny 10.000Ariary.
Ambatondrazaka Vita hatrany amin’ny 50% ny kianja manarapenitra
Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana dia efa vita hatrany amin’ny 50 % any ho any ny fanamboarana ny kianja Rasolonjatovo ao Ambatondrazaka ho lasa kianja manara-penitra.
Andaboly Toliara Miandry ny « tapis » sentetika ny kianja Maître Kira
Raha ny vaovao voaray avy any amin’ny tompon’andraikitry ny baolina kitra any an-toerana dia ny « tapis »
Baolina kitra « Ligue 1 » any Frantsa Mitombo ny isan’ireo voan’ny Covid-19
Nanambara ny tompon’andraikitra ao amin’ny klioba TFC Frantsay, tamin’ny talata 23 jona teo fa mpilalao miisa 4 no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina covid-19
Ravinala Airports Hiova ny fomba fiasa atsy ho atsy
Varavarana hisokafan` i Madagasikara amin` izao tontolo izao ny seranam-piaranamanidina etsy Ivato.
Sehatra fizahantany Misy hatrany ny fanalefahana ara-ketra
Anisan’ny notsinjovina manokana mihitsy ny sehatra fizahantany izay lasibatra tanteraka noho ny fisian’ny valanaretina coronavirus.
Fampindramam-bola « crédit miarina » 50 miliara Ar ny fanampiana ireo orinasa
Nampanantenain'ny Filoham-pirenena ny fampindramam-bola « crédit miarina » hanampiana ireo sehatra tsy miankina nisedra olana amin’izao hamehana ara-pahasalamana ateraky ny aretina covid 19 izao.
Fanatanterahana ny PGE “Manao ny ainy tsy ho zavatra ny governemanta”
Nanao tatitra teny amin` ny Antenimierandoholona ny Praiminisitra Ntsay Chrisitian sy ny mpikambana eo anivon` ny governemanta amin`ny
Tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana Lany teo anivon` ny Antenimieram-pirenena
Omaly no nandalo teo anivon` ny Antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna mahakasika ny lalàna momba ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana (LFR) taona 2020 ( PL 009-2019).
Analamahitsy Jiolahy 3 maty voatifitry ny polisy
Naheno loharanom-baovao ny polisy avy ao amin’ny Bbc 4 sy CSP2 fa misy jiolahy mitady hanao fanafihana mitam-piadiana eny amin'iny faritra Analamahitsy iny.
67ha akaikin’ny hotely Manga Mbola nitrangana haintrano indray
Mbola nitrangana haintrano indray omaly teo akaikin’ny hotely Manga, etsy 67ha hatrany.
Tanoran’ny fikambanana Miozolimanina Hanohy ny fanampiana ireo traboina etsy 67 ha
Vary 20 gony, Siramamy 4 gony, Spaghetti 10 baoritra, menaka 10 baoritra, izay no vita androany (TTF: omaly) fa mbola hitohy rahampitso inchallah na koa hoe raha sitrapon’Andriamanitra, hoy ry zareo tanora avy eo anivon’ny fikambanana
Niakatra 16 ny matin’ny Coronavirus Ambony ny taham-pahavoazana
Vehivavy 46 taona indray no namoy ny ainy vokatry ny coronavirus tany amin’ny CHU Morafeno Toamasina. Tafiakatra 16 araka izany ireo olona namoy ny ainy hatramin’izay teto Madagasikara.
Ady amin’ny Covid-19 any Betroka Manampy vahoaka ireo olom-boafidy sy ny Omc
Araka ny fampitam-baovao azo avy amin’ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana, Randrianasolo Jean Nicolas,
Ady amin’ny Coronavirus Nitambatra nanome soso-kevitra ny olompirenena maro
Firaisankinan’ny Kristiana, mpitantana orinasa, teknisiana sy olom-pirenena tsotra.
Ady amin’ny COVID 19 Nanambatra ny heriny ny Fanorolahy
Tsy mitsaha-miakatra ny tahan’ireo olona lasibatry ny tsimok’aretina COVID 19 eto amintsika, indrindra tao anatin’ny herinandro izao.